Smart Level Pro (SLP)
WPAS Smart Level (WSL)
Smart Home System isasystem which enables the remote mornitoring and management ofahome such as electronic devices, doors , opening and closing water pump ,etc. using the mordern technology.
To beasmart home, Bits Manager Co.,Ltd has been selling the Smart Wifi Switch and Smart Sensors Devices with reasonable price.
The following things can be controlled and managed remotely by smart phone or computer connecting Smart Wifi Switch Devices.
Room Temperature, Air Humidity and so on
Using Smart home Application, You can control your home from anywhere Internet access.
Do you forget to close the electronic devices in your home? Do not worry about that! You can close all of these from anywhere with the smart phone.
Smart Level Pro(SLP) သည် လူကြီးမင်းတို့၏စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများတွင်ရှိသော စက်သုံးဆီကန်များ(ဓာတ်ဆီ၊ဒီဇယ်)၊ စားသုံးဆီကန်များ၊ဓါတုအရည်ကန်များ နှင့် ရေကန်များ အတွင်းရှိသော အရည်ပမာဏကို ဖုန်း၊ကွန်ပျုတာတို့ဖြင့် စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
ဖုန်း၊ကွန်ပျုတာတို့မှတစ်ဆင့် အောက်ပါအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည်နိုင်သည်။
လှောင်ကန်အတွင်းရှိ အရည်ပမာဏကို လီတာ(သို့)ဂါလန်တို့ကို သိရှိနိုင်ခြင်း
လှောင်ကန်အတွင်းရှိ အရည်နည်းလျှင် ပန့်မော်တာမောင်းခြင်း၊သတ်မှတ် အရည်အမှတ်(သို့)ပမာဏရောက်ရှိပါက ပန့်မော်တာပိတ်ပေးခြင်း သတိပေးခြင်များ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
ပန့်မော်တာများ၏ ဗို့အား၊ဝန်အားများ သိရှိနိုင်ခြင်း
ပန့်မော်တာများကို အချိန်ပိုင်းအလိုက် အလှည့်ကျမောင်းနိုင်ခြင်း
ပန့်မော်တာများ၏ အလုပ်လုပ်ပြီးသော နာရီများသိရှိနိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဖုန်း၊ကွန်ပျုတာတို့မှတစ်ဆင့် အောက်ပါအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
လှောင်ကန်အတွင်းရှိ အရည်နဲအမှတ်၊အရည်များ အမှတ်များ
ပန့်မော်တာများအတွက် ဝန်အားများတန်ဖိုးများ၊ဝန်ပိုတဲ့အခါ ဖျက်ချရန်စောင့်ရန်အချိန်တန်ဖိုးများ
ပန့်မော်တာများအတွက် အလှည့်ကျမောင်းရန် အချိန်သတ်မှတ်ခြင်းများ
လှောင်ကန်၏ထုထည်နှင့် ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီး လှောင်ကန်ထဲရှိအရည်ပမာဏတွက်ချက်နိုင်ရန် လက်ကျန်ပမာဏ၊သတ်မှတ်အကွာအဝေး၊သတ်မှတ်ပမာဏတို့ကို သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း
Smart Level Pro (SLP) ကိုဗားရှင်းပုံစံ ၂ မျိုးဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်။
အခမဲ့ ဆာဗာအသုံးပြုချင်း(Free Server)ဖြင့်သုံးလျှင်စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းကို (၁)နှစ်အာမခံ၊ဆားဗစ်ဝန်ဆောင်မှုကို (၃)နှစ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ငွေပေး ဆာဗာအသုံးပြုချင်း(Paid Server)ဖြင့် သုံးလျှင် အလွန်သက်သာသောနှစ်စဉ်ကြေးပေးရန်သာလိုအပ်ပါသည်။လိုင်းအလွန်ကောင်းသော ဆာဗာဖြင့်အသုံးပြုသူများ အဆင်ပြေစေရန်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းအပြင်ဆားဗစ်ဝန်ဆောင်မှုကို တစ်သက်စာအာမခံ(Lifetime Warranty)ပေးထားခြင်းဖြင့် အသုံးပြုသူများအဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါသည်။
ကုန်ကြမ်းများမှလွဲ၍ အရေးကြီးသောစနစ်တစ်ခုလုံးကို ပြည်တွင်းပညာရှင်များနှင့်သာပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ရေရှည်ဝန်ဆောင်မှုတွင် အသုံးပြုသူများစိတ်ချမ်းသာစေမှာဖြစ်ပါသည်။
WPAS Smart Level(WSL) သည် လူကြီးမင်းတို့၏အိမ်၊စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများတွင်ရှိသော ရေကန်များကို ရေမော်တာအလိုလျောက်မောင်းတင်ခြင်း၊မိုဘိုင်းဖုန်းမှရေကန်ထဲရှိရေပဏနှင့်ရေမော်တာများ ကိုစောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ရေကန် ၂ ကန်၏ရေအမှတ်များ
မော်တာဖွင့်မည့်ရေအမှတ် (ရေအမှတ် ၁ မှ ၁၆ ထိ)
မော်တာပိတ်မည့်ရေအမှတ် (ရေအမှတ် ၁ မှ ၁၆ ထိ)
ရေတင်ချိန် ရေပိုက်အတွင်းရေစီး‌၊ရေကျအာရုံခံခြင်း (၁ မိနစ်မှ ၈ မိနစ်ထိ)
မော်တာမောင်းရန်အချိန် (မိနစ် ၃၀ ခြား၍ ၄နာရီထိ)
မော်တာရပ်နားရန်အချိန် (၁၅ မိနစ် ခြား၍ ၂ နာရီထိ)
) ဗို့အားနည်းတန်ဖိုး (၁၅၀ မှ ၂၀၀ ဗို့အား)
ဗို့အားများတန်ဖိုး (၂၀၀ မှ ၂၅၀ ဗို့အား)
ဝန်ပိုတန်ဖိုး (၂၀ အင်ပီယာထိ)
မော်တာအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ဝန်ပိုကြာချိန် (၁ စက္ကန့်မှ ၁၀ စက္ကန့်ထိ)
ကွန်ပရက်စာအတွက် လေဗား ဖွင့်ပိတ် (မော်တာမမောင်းမှီနှင့်မောင်းပြီး)
စတာတွေကို အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက် အဝေးမှပြုပြင်နိုင်ပါသည်။
User Mannual For User Mannual For User Mannual For
Download Myanmar Smart Home App
Google Play For Apple Store Your Computer
Smart Home Screenshots
Smart Level Pro Screenshots
WPAS Smart Level(WSL) Screenshots
Smart Level Pro(SLP)
Smart Level Pro (Bluetooth)
WPAS Smart Level(WSL)
Bits Manager Co.,Ltd, the top floor of Nandaw Shae Market, 19th Street,Between 63rd & 64nd Street, Mandalay,Myanmar.
19th Street,Between 63rd & 64nd Street
Copyright © All rights reserved | Created by Bits Manager Co.,Ltd